कसरी सुरक्षित गर्न - बुद्धिमानीपूर्वक पैसा व्यवस्थापन गर्न सिक्न
हामी सबै थाहा - आर्थिक तपाईं कम खर्च र थप कमाउने छैन प्रयास गर्नुपर्छ पहिलो स्थानमा सहज महसुस गर्न। विभिन्न समाज, पैसा कमाउन सुरुमा विभिन्न तरिकामा, त्यसैले उनीहरूसँग उपचार गर्न पैसा "बनाउन" गर्न सक्षम, तर पनि व्यावहारिक हुन मात्र होइन महत्त्वपूर्ण छ: तर, सबैको जीवन फरक विकास। त्यसैले, कसरी राम्ररी बचत गर्न?
औसत युरोपेली नागरिक सामान्य मासिक खाना को लागत 8-12% को दर हो भने, घरेलू मानिसहरूले यसलाई कहिलेकाहीं 40-50% पुग्न सक्दैन। अक्सर छ लागत वस्तु , तपाईंको दराज अद्यावधिक गर्न आवश्यक उपकरण खरिद वा परिवार आराम अनुमति छैन। उत्पादनहरु को खरिदका लागि लागत लागि यति कडा हुने छैन , परिवार बजेट तपाईंले केही सरल नियमहरू पालन भने। लागि भनेर पसलमा जानुअघि, तपाईं संवाददाता सूची सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ - उदाहरणका लागि, केवल सही उत्पादनहरु किन्न। उत्पादन केही पसलहरु साँझ घण्टा मा छूट र rebates बारेमा पनि भूल छैन, वितरण केन्द्र वा बजार मा राम्रो किन्न।
त्यहाँ परिवहन पैसा बचत गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। तपाईं सार्वजनिक परिवहन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो एक मासिक पास किन्न अर्थमा बनाउँछ। छोटो दूरीमा र पैदल पारित गर्न राम्रो - दुवै उपयोगी र आर्थिक लाभदायक। तपाईं एक निजी कार, छोडेर को पाठ्यक्रम प्रमुख माध्यम, यसको इन्धन भर्ने छ भने। इन्धन कसरी सुरक्षित गर्न? धेरै सरल। ट्यूब मा इन्जिन बन्द - र हावा क्लीनर superfluous हुनेछ र इन्धन लिटर बचत गर्न सक्नुहुन्छ। तर कार के refuels गुणस्तर, छैन बचत लायक छ। कम गुणस्तर इन्धन प्रयोग बाट सम्भव क्षति साथै बचत भन्दा बढी हुन सक्छ।
अर्को, को बारे मा थोडा ऊर्जा कसरी सुरक्षित गर्न र अन्य संसाधन, जसको लागि उपयोगिता मासिक बिल बिल। पहिलो, घर (घर) मीटर राख्नु - यो मासिक शुल्क भन्दा धेरै सस्ता छ। साथै, देखि तपाईं आफ्नै स्रोत खपत नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। बिजुली गर्न विशेष सन्दर्भमा, त्यसपछि, सबै को पहिलो, प्रयोग गर्न जाने ऊर्जा बचत प्रकाश बल्ब को। हो, तिनीहरू सामान्य भन्दा अधिक महंगा, तर धेरै पटक अब एउटै समय अवधि मा एक सानो हो। विद्युत केतली हरेस amiss छैन। घरमा बिजुली छ भने, त्यसको विपरीत, यो एक विद्युत केतली किन्न उचित छ।
वस्त्र पसलहरुमा बिक्री र जुत्ता बारेमा सबैलाई थाह छ। पैसा कसरी सुरक्षित र छुट दर मा लुगा किन्न जानकारी अक्सर सामाजिक सञ्जाल, आदि समूहमा देखा यो गल्ती हो र दोस्रो हात जरूरी पसलहरूमा मा लुगा कम ग्रेड भन्छन्। धेरै त्यस्ता ठाउँमा भन्सार द्वारा जफती पछि बेचिएको ब्रांडेड वस्तुहरू किन्न केही गर्न अर्को लागि हुन सक्छ।
कसरी सुरक्षित गर्न थप संभावना खोज्न? सायद जवाफ हाम्रो noses अन्तर्गत शाब्दिक छ। यो मासिक खर्च कति गणना गर्न सजिलो छ बानी। खराब बानी हरेस, तपाईं पनि अत्यन्तै स्वास्थ्य लाभ उल्लेख गर्न हरेक महिना कि रकम सुरक्षित छौँ, छैन।
तपाईंको प्रयासहरूलाई राम्रो भाग्य।
निक्षेप को पूँजीकरण - यो निवेशक दिन्छ?
"Rosneft" लोयल्टी कार्ड: कसरी प्राप्त गर्न, कसरी बाहिर कति अंक पाउन?
इटाली को एक टुक्रा - पास्ता नुस्खा
जब मौन शिकारी6हुनेछ?
उपहार कसरी चयन गर्न
कटौती 114: कसरी प्राप्त गर्न। 2017 मा परिवर्तन
को स्लाव भाषाहरु वर्णमाला को निर्माताहरू। जो 9th शताब्दीमा स्लाव भाषाहरु वर्णमाला सिर्जना?
घरमा मनन कसरी?
भिडियो रिकर्डर "Mio" - समीक्षाहरू